Sony ichabhadhara mamirioni kubvisa Linux kubva kuPS3 | Linux Vakapindwa muropa
Sony ichabhadhara mamirioni kubvisa Linux kubva kuPS3
Sony ichiri kuona yakakosha iyo PlayStation 3 chikuva, kunyangwe hazvo iyo PS3 yatove nevateveri vazhinji. Uchapupu hweizvi ndohwekuti, mushure memakore matanhatu ematare pamusoro penyaya yeLinux paPlayStation 6, ikozvino Sony iri kutora matanho ekupererwa, uye iri kuda kubhadhara mamirioni emadhora kubvisa Linux kubva kune yayo PlayStation 3. Chikonzero? Kurasikirwa kwakakonzerwa nevapambi vakakwanisa kutora mukana weiyi nhare yePS3 kurodha mitambo yepirati isina kusainwa naSony pane vhidhiyo koni.
Kana iwe usiri kurangarira, ini ndichamhanya ndangariro dzako. Sony yakatanga chirongwa chayo chitsva chePS3 ine yayo ine simba njovhera (Sony Toshiba uye IBM) Cell chip, iyo yaive yakavakirwa paPowerPC ine zvinhu zvisere zvekugadzirisa izvo zvakaburitsa pachena mashandiro ekuita. Pamusoro peizvozvo, yaive neBlu-Ray muverengi uye 8MB RAM, hapana chekugodora macomputer emakomputa enguva iyoyo, zvekuti Sony yaidada nekugadzirwa kwayo zvekuti yakabvumira Linux kuiswa pamutambo weconsoon tarisa kuti yako koni yemutambo inogona kutsiva zvakakwana PC.
Kunyangwe avo vekwaSony vangangodaro vasina kufunga kuti izvi zvichavaunzirei, sezvo mutemo waigadzira musungo. Vazhinji vashandisi vakashandisa mukana uyu kune zvakaipa, vachitora mukana wekuti iwo ma distros akadai Yero Imbwa Linux iyo yakatsigira PPC pane iyo koni. Nesimba reLinux distro pane zvinhu zvishoma zvisingakwanise kuitwa, uye vashandisi vazhinji vakaona kuti vanogona kutora mukana nazvo kuti vakwanise kurodha pirated mitambo isina kusainwa pane iyo PS3 koni vasina kuitenga, zvichikonzera kurasikirwa kukuru kune indasitiri yemitambo. varaidzo.
Nokubvisa mukana wekuisa Linux, Sony ingadai yakawira mukushambadzira kwakatsausa mushure mekuzivisa. Asi makore matanhatu gare gare, kunyangwe asina kuwanikwa aine mhosva, a chibvumirano nemagweta nenzira yekuwedzera-yekutonga, mune iyo kambani yeJapan ichabhadhara mamirioni emadhora kuti agovaniswe nevashandisi vanokanganiswa neshanduko kubhadhara chikwereti uye kukwanisa kupedzisa kurota uku kwePS3. Asi zvinoita sekunge chibvumirano ichi chinongobata vashandisi veUS pari zvino, vachibhadhara madhora makumi mashanu nemashanu kune mumwe wevanhu vanegumi gumi vabatwa. Iwe unongoda chete humbowo hwekutenga nekumisikidzwa kweLinux pairi uye kana iwe usina humbowo uhwu, asi iwe unosimbisa nekusaina kuti waiziva nezve mukana wekuisa Linux panguva yekutenga, uchagamuchira madhora mapfumbamwe. Magweta anogamuchira zvakanyanya, 55 mamirioni pamabasa avo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Sony ichabhadhara mamirioni kubvisa Linux kubva kuPS3
Iwo musoro wenyaya hauna zvachose nzvimbo.
Izvo hazvisi "kubvisa linux kubva ku ps3", asi nekusabvumidza kuiswa kwayo mushure mekuitengesa, kushambadzira iyo inogona, ndiko kuti, kutsausa kushambadza.
John jairo akadaro
murume, ivo vanofanirwa kudzidza kunyora misoro, usatarise iyo yakachipa clicbite
Pindura Jhon Jairo
Maitiro ekuvandudza yako yekare Fedora kuenda kuFedora 24
Iwo gumi akanyanya marekodhi eako terminal